Isitolo esidayisa yonke impahla laminate phansi imibala parquet Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | Moyo
Usayizi: 806X403mm, 1214x296mm
Li-aminate flooring (ebizwa nangokuthi i-floating wood tile e-United States) ingumkhiqizo owenziwe ngezingqimba eziningi ohlanganiswe nenqubo yokuvikela ngocwazi. I-laminate flooring ifanisa izinkuni (noma kwesinye isikhathi itshe) ngongqimba lwezithombe olusetshenziswayo ngaphansi kongqimba olucacile lokuzivikela. Ingqimba yangaphakathi yomgogodla imvamisa yakhiwa nge-melamine resin kanye nezinto zokwenziwa kwe-fiber board. Kukhona i-European Standard No. EN 13329: 2000 ecacisa izidingo zokumboza phansi laminate nezindlela zokuhlola.
I-laminate flooring ikhule kakhulu ekuthandeni, mhlawumbe ngoba kungaba lula ukuyifaka nokuyigcina kunezindawo eziningi zendabuko ezifana ne-hardwood flooring. Ihlala isikhathi eside, inenhlanzeko (imikhiqizo eminingana iqukethe i-resin elwa namagciwane), futhi kulula ukuyigcina.
Izitezi ezinamanzi zilula ngokwanele ukuba umninikhaya afake i-DIY. I-laminate flooring ihlanganiswe njengezinombolo zamapulangwe ezilimi nezindawo, ezingachofozwa. Kwesinye isikhathi kunikezwa ukusekelwa kweglue ukuze kube lula ukufakwa. Kufakwe izitezi ezinamamitha ngokuvamile "zintanta" ngaphezulu kwesitezi esingaphansi kwembondela / ifilimu engaphansi, enikezela ngezakhiwo zomswakama nezinciphisa umsindo. Kudingeka igebe elincane (1–10 millimeters (0.039-0.394 in)) phakathi kwephansi nokwakhiwa kwanoma iyiphi into enganyakazeki enjengezindonga, lokhu kuvumela isitezi ukuthi sandiswe ngaphandle kokuvinjelwa. Amabhodi wasisekelo (amabhodi okushibilika) angasuswa abuye afakwe kabusha ngemuva kokufakwa kukaphethiloli kuqedile ukuze kuphele kahle, noma i-baseboard ingashiywa isendaweni lapho ifulethi lifakwe kulo, bese kuthi izintambo ezincane zobuhlalu ezinjengokubumba isicathulo noma ikota elikhudlwana -Ukubumba okuzungezile kungafakwa ezansi kwamabhodi wasisekelo. Ukusika okwenziwe emapulangweni kuvame ukudingeka emaphethelweni nasezindongeni zekhabethe neminyango, kepha abafaki abangochwepheshe basebenzisa amasaha omnyango we-jamb ukusika isikhala esiya endaweni ephakeme evumela ukuthi i-flooring ingene ngaphansi komnyango we-jamb & casing yokubukeka okuhlanzekile .
Ukufakwa okungalungile kungaholela ekuqhakambeni, lapho amabhodi aseduze akha umumo we-V ovela phansi, noma izikhala, lapho amabhodi amabili asondelene ahlukaniswa khona.
Kubalulekile ukugcina i-laminate ihlanzekile, njengoba uthuli, ukungcola, nezinhlayiya zesihlabathi kungaklwebha ingaphezulu ngokuhamba kwesikhathi ezindaweni ezinabantu abaningi. Kubalulekile futhi ukugcina i-laminate yomile, ngoba ukuhlala amanzi / umswakama kungadala ukuvuvukala kwamapulangwe, i-warp, njll. Ukuchitheka kwamanzi akuyona inkinga uma kusulwa ngokushesha, futhi kungavunyelwe ukuhlala isikhathi eside.
Amapayipi wokuzwa okunamathelayo avame ukubekwa ezinyaweni zefenisha phansi laminate ukuvikela ukunwaya.
Izitezi ezingaphansi ezingenalutho ezingenalutho zingase zehlukane kancane kancane, kudale izikhala ezibonakalayo phakathi kwamapulangwe. Kubalulekile ukuthi "uthinte" amapulangwe uhlanganise ndawonye usebenzisa ithuluzi elifanele njengoba kubonwa izikhala ukuze kuvikelwe ukungcola okugcwalisa izikhala, okwenza kube nzima ukuzibeka endaweni.
Izitezi ezisezingeni eliphakeme ezingenalutho zisebenzisa izindlela zokujoyina ezigcina amapulangwe ehlangene ngaphansi kwengcindezi engapheli evimbela ukungcola ukungena emajoyintini futhi okungadingi "ukuthepha" ukuhlangana ndawonye ngezikhathi ezithile.
Langaphambilini I-Ecomomic laminate floor EIR Series
Olandelayo: I-Laminate Floor yama-Wholesales nochungechunge olujwayelekile